Dowlada oo Fariin muhiim ah u dirtay Ganacsatada Soomaaliyeed ee hantida badan ku heesata … | Baydhabo Online
Wasiirka Maaliyada Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa fariin u diray ganacsatada Soomaaliyeed ee inta badan hantidooda galiyay dalal dibadda ku yaala.
C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa ugu baaqay Ganacsatada Soomaaliyeed inay ka fakaraan amaanka hantidooda ,waxaana uu tilmaamay in halka ugu wanaagsan ay tahay in waddanka kooda ku malgashadaan si ay ugu badbaado bulshadana uga faa’iido.
“Waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa in baahi weyn loo qabo in ay Maalgalin ku sameeyaan Dalkeena Soomaaliya oo ay Muruqooda, Maskaxdooda iyo Maalkoodaba u huraan, sidoo kale waxaan Baaq iyo dhiiri galin u jeediyay ganacsatada Soomaaliyeed ee Dibadda ku nool in ay hantidooda ilaashadaan oo meel amaan ah ku hubsadaan”.ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa ugu baaqay ganacsaada Soomaaliyeed ee wadamada dibadda gaar ahaan qaarada Afrika hantida ku leh in ay dalkooda kusoo laabtaan si hanyidooda ugu nabad gasho.
Hadalkan kasoo yeeray Wasiirka Maaliyadda ayaa u muuqda mid si gaar ah fariinta ugu socoto ganacsatada Soomaaliyeed ee hantida badan galiyay dalka Kenya, waxaana suurto gal ah in ganacsatadaasi mar walbo ay halis gali karto hantiada badan ay dalkaasi galiyeen.